Haben'ny habe: 12mm * 20mm
Matetika: 1-10Hz azo ovaina
Fangatahana rafitra: Fangatsiahana hafanana tsy tapaka 25
Ny teôria fototra an'ny Diode Laser Hair Removal Machine dia ny vokatra biolojika. Ny masinina dia mamoaka ny laser 808nm izay mety ho azon'ny pigment miorina amin'ny follicle volo nefa tsy hanimba ny epidermis mahazatra manodidina azy. Ny angovo maivana dia entin'ny pigment ao amin'ny volo sy ny follicle dia ovaina ho angovo hafanana, amin'izany dia mampiakatra ny maripana ny folikelika, mandra-pahatongan'ny hafanana avo dia avo, ny rafitra follicle dia simba tsy azo ovaina, ny follicle simba dia hesorina aorian'ny vanim-potoana fizotra ara-batana voajanahary, ka hahatratrarana ny tanjona fanesorana volo maharitra.
1. Ny halavan'ny laser tsara indrindra
Ny 755 + 808 + 1064nm dia tsara indrindra handraisana melaninina mba hanan-kery amin'ny faritra samihafa sy ny folon'ny volo ary hahatratra ny fanesorana tsara ny volo rehetra. Avy amin'ny sary dia hitantsika fa ny 808nm no tsara indrindra handraisana melaninina ary tsy hakelenan'ny hafa.
2. Ny sakany amin'ny pulsa laser fohy
Ny faharetan'ny pulsa laser dia 10ms ka hatramin'ny 80ms azo ovaina, afaka manao fitsaboana manokana miavaka ho an'ny volo samihafa sy maharitra!
3. Tsy misy pigmentation, ampiasaina amin'ny karazana hoditra.
Ny rafi-panesorana volo P-808 dia mampiasa teknolojia penetrate ary ny hoditra dia miteraka laser kely kokoa ary tsy misy loko.
4. Ny rafitra fitadiavana safira madio dia afaka mahazo antoka fa azo antoka kokoa ny fitsaboana ary tsy misy ratra amin'ny hoditra.
Ny rafitra fihenan'ny safira madio amin'ny rafitra fanesorana volo P-808 dia afaka mahazo antoka fa mampiasa ny angovo be indrindra ny dokotera ary tsy maharary ny hoditra. Ity karazana rafitra mangatsiaka ity dia afaka mahazo antoka fa tsy misy maharary ny hoditra rehefa omena tsindry bebe kokoa ny marary. Araka ny voalaza dia afaka mampiakatra hazavana 30% -40% ny tsindry.
5. Ny haben'ny toerana lehibe dia afaka manafaingana ny hafainganan'ny fitsaboana.
P-808 mampiasa haben'ny toerana lehibe 12 * 12mm. Izy io dia manome antoka fa rehefa manaisotra volo amin'ny faritra midadasika ary haingana sy haingana ny fitsaboana. Noho ny haben'ny toerana lehibe dia afaka mandositra ny fitsaboana miverimberina amin'ny faritra volo izy io.
6. Sarimihetsika fakan-tsary miloko tena lehibe ataovy mora kokoa ny fandidiana 10.4 mirefy efijery maro loko, azonao atao ny misafidy lehilahy na vehivavy, loko amin'ny hoditra ary faritra fitsaboana, tena mora ampiasaina!
1. Touch efijery no tena miasa sy mampiseho ampahany amin'ny rafitra fanesorana volo.
2. Ny fankatoavana ny loko manga sy fotsy, ny interface dia azo antoka, azo vakiana ary be fiheverana.
3. Araka ny ergonomics, ny interface operator dia natao ho an'ny lahy sy ny vavy。
4. Amin'ny alàlan'ny efijery mikasika, azonao atao ny manatanteraka ireo fiasa ao anatin'izany ny fanakatonana, ny fantsom-panafody masontsivana ary vonona ary hampiasa ny laser.
5. Tsy afaka nanao afa-tsy ny fari-paritra, ny switch mode, ny fanokafana ny vata fampangatsiahana ary ny fanakatonana mandritra ny fiandrasana maody
Niorina tamin'ny 2005, Beijing sano Beauty S & T Co., Ltd no mitarika amin'ny fampiharana ny haitao mandroso sy ny haitao maivana amin'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny hatsaran-tarehy.
Ankehitriny izahay dia namolavola andian-dahatsoratra Mona IPL, hazavana E, laser fizarazaran'i Co2, laser diode 808nm, lozisialy ultrasonika, RF fizarazaranay ary laser fitomboan'ny volo.
Miaraka amin'ny ekipa R & D mahomby, fahaiza-mamokatra marobe ary rafitra fanaraha-maso kalitao azo antoka, Beijing Sanhe Beauty no mamatsy ny serivisy OEM & ODM ary manampy ny mpanjifanay hanangana ny lazany manokana ary hifaninana kokoa eo amin'ny tsena.
Ny fizotry ny famokarana rehetra dia eo ambanin'ny rafitra ISO13485 Quality ary mifanaraka amin'ny fangatahana fanamarinana CE.
Beijing Sanhe Beauty dia hiasa mafy amin'ny famatsiana vokatra tsara indrindra ary aorian'ny fivarotana.
Teo aloha: Masinina hozatra manangana EMSculpt
Manaraka: P-afangaro ny fanesorana volo laser amin'ny halavan'ny andalana telo
P-afangaro ny fanesorana volo laser amin'ny alàlan'ny onja telo ...
Salon hatsaran-tarehy maharitra matihanina vaovao 755 808 ...
Fanesorana volo Shr Opt Ipl, Laser estetika Co2, fanesorana ny holatra, Shr Ipl Opt, Co2 Laser Laser miato, Masinina mpanentana hozatra Ems,